I-Garden View Room ne-Sunny Private Porch - I-Airbnb
I-Garden View Room ne-Sunny Private Porch
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Emily
U-Emily Ungumbungazi ovelele
Lolu wuhlu oluhle kakhulu lokongayo lwalabo okungenzeka basedolobheni ukuze baye esikoleni noma benze iphrojekthi emfushane. Itholakala izinyanga ezi-1 kuye kweziyisi-6. Uzoba ekamelweni elizimele phansi nabanye abantu abangu-3, ukwabelana ngezindawo ezivamile, ikhishi kanye negumbi lokugezela. Ungahamba ngezinyawo uye esiteshini se-bart sase-Ashby, ongafika ngaso e-San Francisco kalula. Ukukhuphuka nokuzayo, indawo ehlukahlukene ye-NOBE (NOBE = North Oakland, Berkeley, indawo yase-Emeryville). Izindawo zokudlela, i-yoga nezitolo zegrosa eziseduze. Sicela uqinisekise ukuthi uyavumelana nemithetho yasekhaya.
Usayizi wekamelo lokulala 10ft x 11ft, unendlu yokugezela yokungena yangasese. Ingadi iyatholakala ngokuhlala nokuba nekhofi noma isikhathi sangasese. Igumbi linombhede ongusayizi wendlovukazi kanye nama-closet amabili. Indlu yokugezela yangasese inobhavu, ishawa, indlu yangasese nosinki. Ikhishi line-induction burner kanye ne-oven kagesi. Sinezinto zasekhishini eziyisisekelo njengamabhodwe namapani namapuleti, nezinye izinto zokuqalisa. Uzodinga ukuthenga izinto zakho kanye nezinto zokuhlanzeka komuntu siqu.
I-Sweet Adeline Bakery emangalisayo iwuhambo olufushane, njenge-Adeline Yoga, kanye nenkampani ephisa utshwala yasendaweni yase-Hoi Polloi. I-Farmer's Market ngoLwesibili unyaka wonke. 92 Biker's Paradise. Qasha i-Ford "GoBike" eduze futhi.